Roahan’i Rolly Mercia hiala eto Madagasikara ny masoivoho Amerikana – MyDago.com aime Madagascar
Roahan’i Rolly Mercia hiala eto Madagasikara ny masoivoho Amerikana
Nanao vava ratsy tamin’ny mpiraki-draharaha Amerikana ingahy Rolly Mercia raha nivahiny tamin’ny onjam-peo tsy miankina iray .« Malalaka ny lalana mankeny Ivato, tokony miala eto izy rehefa tsy tiany ny zava-misy eto » hoy izy.Fandroahana tsotra izao no andikana ity tenin’ingahy Rahajason ity.Rehefa avy nanao vavan’ny mpiady an-tsena tamin’ny mpanao gazetin’ny fahitalavitra tsy miankina iray ny tenany dia izao manalabaran-tena izao.
Mampitsanga-menatra raha i Rolly Mercia no hatao fitaratra amin’ny asa fanaovan-gazety !
Auteur Solo Razafy*Publié le 12 février 2013 12 février 2013 Catégories Politique
24 réflexions sur « Roahan’i Rolly Mercia hiala eto Madagasikara ny masoivoho Amerikana »
Izao no atao hoe lohan’alika.
Aleo hitady loza @ CIA ! i Kennedy aza matiny koa inona izay Domelina sy Rolly Mercia !!!
Sady mampihomehy no tsy misy dikany mihitsy rizareo – fa iza moa ianao é !
Na ny tarehy aza dia manambara fa fatritrany. Manajà tena fa tena afa-baraka ianareo & !
12 février 2013 à 12 h 54 min
Angaha dia tsy maintsy misolelaka ihany vao fantatra hoe manao tsara ny asany ry mercia ah,efa hita fa olona misavoana avokoa na ny hevitra na ny fihetsika,miala bala sisa no atao
12 février 2013 à 12 h 57 min
ramatoa ts de manaja olona loatra!! merci prezidà Rajoelina ah, zahay manoana anao foana!!
Miala any indray ry maivandoha isany. Ty misy aleha afatsy aty. POUAH
Le compte à rebours pour son « exécution » et celle de son PT a commencé à l’instant même où il a prononcé cette phrase ra-Rolly qu’on ne dira pas Mercia ! Rappelez-vous de Déba et sa déclaration malheureuse au sujet du 11 septembre ! Ho mafy no ireny nahazo an’i deba ireny no ahazo an’ilisany ireo ry foza !
12 février 2013 à 15 h 29 min
Ity Rolly Mercia ity dia tena tsy mijery ny fiaianam-pirenena mihtsy nefa minisitra. Tsy tsy mahafantra mihitsy ve ilay gidro lahy io hoe io toerana io anie ka tsy ho azy foana e. Henjihina i Omery Beriziky, tevaina i Onitiana Realy, Lotoina ny Mpanolo-tsainan’ny Etazonia…
Raha izaho aloha dia dia aleoko manohy an’izany foana izy @ izao mitombo be dia be ny fahavalony dia raha vao mivoaka ny trano tonga dia darohan’ny olona.
Aty no tompon’ny loharatsy rehetra tamin’iny taona 2002 ireny raha teo akaikin’nd Ratsiraka izy t@zay , mbola tsy fay ihany ity lelahy ratsy toetra, ratsy saina ratsy fanahy eny nadia tarehy azy ratsy daholo, Io serasera io ihany no mba fitaovana entiny hanankorontanana ny firenena, fahadisoana goavana no nandraisan’drajoelina io Mercia io hiarahiasa aminy mandentika azy fa tsy hanavotra azy akory
Le plus mauvais conseiller de Ratsiraka mandentika ihany no mba hainy ary ho ataony @ rajoelina ihany koa izany, mba misaina @ zay ee
Rolly Mercia! Izany ka journaliste neutre an! sady journaliste no rédacteur en chef no conseiller an’i radomelina!
Andefaso commando any USA tarihin’andriamatoa jeneraly vrai-faux coma Richard Ravalomanana rehefa misy tsy mahafaly.
valy boraingina sy resaka adaladala toy izay no tsara hiadiana hevitra @ ireto hat ireto
randrianina dit :
rehefa mandalo ny 4X4 ny Mercia ange ka tsy maintsy mihisaka daholo ny voitures rehetra fa tandremo an. Santionany fotsiny io fa aza mifanena amin’ny paka kitay ihany.
Fa iza io Rolly Mercia io e.
Ohatra le bandy maimbo toaka nifanena tamiko tao Isotry …
12 février 2013 à 18 h 50 min
Izao fomba mamoaka ny haino aman-jery izao no ATAO MATOTRA SY MISIMISY KOKOA HATRANY !
Izany no ANISAN’NY fomba HAFA haingana, hanalàna an’i Domelina.
Ny resaka ataon’izy mianadahy ( Masoivoho Amerikana sy Onitiana) izao dia tena zava-dehibe.
Enga anie ho maromaro ny FAMPIASANA ny HAINO AMAN-JERY toy izao.
Momba an’i Rolly moa dia toy ny miresaka amin’ny Jiolahim-boto, ka vali-boraingina daholo no valiteny mety ho azo. TSY MBA ASIANA SIRA ny valiteny ataony, fa ny miroso mamoaka vaovao hatrany no tena atao hoe LOBBYING.
AVELAO R’IZAREO NO MIFAMALY ARAKA IZAY TIANY any.
Na ny tarehin’ilay jiolahy avy any Maevatanana io aza dia tarehin’ilay jiolahy mpiteny masim-bavy hélène any an-tranoniny !
Tsy mifamaly amin’ny faikam-boto raha te-hanaja tena, fa loha-taoka sy rongony ireny. Ny atao no mandina e !
Io dia isan’ny valin’ilay fanontaniana napetrakao tamiko.
12 février 2013 à 19 h 01 min
Iza moa ary ho aiza rehefa midaboka eo ity r.m.ity ?
Vavan’ny rendrika !
dia efa miteniteny foana; izany vava latsaka tsy azo raofina.tena menatra ny vahoaka malagasy amin’itony lamokany itony
12 février 2013 à 20 h 29 min
Fa firifiry @ olona ohatra an’io no FAKO ao @ fitondrana aoa anefa???
manomboka @ LOANY ka hatrany @ FOKOTANY?? inona no mahagaga anareo
ry zareo???ireny no atao mba hamotipotika kokoa ny firenena, ary DIZINA be @’io lery an!!
Tsy maninona akia Onitiana na nadevozindry teo aza ity domelina fa iza koa anefa ity izy???sahaza azy tsara izay.
Tokony ho natsipindry lavitra tery aza ny kirarondry dia nasaindry nalainy mba nihomehezana kely hihiiiiSao dia mba
tsy taratasy kosa no natolony andry aloha fa lazaindry fa avy any anaty paosiny mantsy ilay izy???toa lasa FILOHA
mantsy ity izy androany????tsy olana koa aloha fa izay hifanarahanareo any e!!dia mbola misaotra fa voatevateva
ihany izy na izany aza.
12 février 2013 à 20 h 34 min
sokafy ny radio fahazavana ,sy ny television nakaton i Rajoelina ,…
tsy télévision iray no hibahana ny fampilazahambaovao … ..
Izay tiko ihany io e!!!misy miiainooo?????
12 février 2013 à 23 h 42 min
Alex o , zay vao tratrako fa ialahy kay no anarana notadiaviko izay anisan’ny nilelaka farany ny divon’i domelina dia manao ahoana takoa leitsy ny tsirony , hitako no mbola mankafy e merci an !
rakotonomenjanahary dit :
13 février 2013 à 4 h 19 min
Tena tsy mety ny nataon ny Minisitra Rolly Mercia ka tokony hanao fialan tsiny amin ny fomba ofisialy amin ny masoivoho amerikana izy.
Inona no fantatr’izay minisitra fôpla amin’izany fialan-tsiny izany ê ?
Manongam-panjakàna aza tsy mahamenatr’azy ! Izy amin’izany efa hatry ny ela no miseho ho « rôla » fa ny vahoaka dia « bandy » daholo !
Misy tsy mety koa, ao anatin’ny lohan’io tary io ! Misy voa daholo ny lohan’ireo mpanongam-panjakàna ireo ! Raha olona misaina toy ny olona rehetra, tsy hahavita heloka be vava toa izao !
Efa tena tonga ny farany e!Mahaiza manafina ny halatra ianareo FAT ireo fa efa voateny iny sady amin’ny anaran’ny MINISITRa mihintsy hoy izy?I Ratsiraka de nisy sens fa vao nanaratsy ny 11 Septembre iny de tsy nisy nitana intsony ny kilaotiny.
Gomaka dit :
Sambany teo @fiainany angamba mba notsipazana tôlana kelin’ny boaderôz d milela-B… tsy afaka mitoditodika mints – (aiza tsony no ahita eh !!!)
Précédent Article précédent : TSY MAINTSY MIJORO NY ANKOLAFY RAVALOMANANA
Suivant Article suivant : MIHOROHORO NY AO AMBOHITSOROHITRA